संसारमा सबैभन्दा बलियो व्यक्ति को हो?
परिक कथाहरु, किंवदंतियों र bylinas नायकहरु अक्सर मुख्य नायकहरु मा। तर यो बाहिर जान्छ कि तिनीहरू केवल परी कथाहरूमा मात्र अवस्थित छन्। त्यहाँ हामी पनि छन्। यी नायकहरू को हुन्? विभिन्न शताब्दीको लागि विभिन्न ग्रहका लागि मानिसहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति (उनीहरूको समयका लागि)। आज, असामान्य असामान्य असामान्य असामान्य उत्तर दिन को लागी संसार को सबै भन्दा शक्तिशाली व्यक्ति को प्रश्न को लागी असंभव छ। यो शीर्षक कसलाई दावी गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस्।
झिडुनुना साविकिकस - 2-टाइम विश्व च्याम्पियन
टूर्नामेंटहरूमा "विश्वको सबैभन्दा बलियो मान्छे " 2009र 2010 मा, विजेता लिथुआनियाको निवासी झीदसास साविकिकस थियो। 15 वर्षको उमेरदेखि, उनीहरूलाई खेलकुदमा संलग्न भएको बलियो प्रशिक्षण चाहिन्छ।
उहाँको खातामा, धेरै रेकर्डहरू:
425.5 किलोग्रामको वजनको साथ स्क्वाट ;
285.5 किलोग्रामको वजनको साथ सुई स्थितिमा पुश अप;
462 किलोग्रामको टुग;
1,090 किलोग्राम लिफ्ट।
अन्तिम प्रतिस्पर्धाहरूको पुरस्कार विजेता
2011 र 2013 मा, प्रतियोगितामा पहिलो स्थान "संसारको सबैभन्दा बलियो व्यक्ति" अमेरिकी ब्रायन शानले जित्यो। 2012 मा यो शीर्षक पोल क्रिस्टोफे रेड्जोकोवस्कीलाई सम्मानित गरियो।
Vasily Alekseev को 80 रेकर्ड
प्रायः पृथ्वीमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति सोभियत भारोत्तर वसीली इवानोविच एलेक्सेभ भनिन्छ, जुन 69 वर्षको उमेरमा थियो। 80 विश्व रेकर्ड को आफ्नो शस्त्रागार मा। 1970 र 1 995को ओलम्पिक खेलहरूको विस्सी अलेक्सेव - पुरस्कार विजेता, विश्व, यूरोप र यूएसएसआरआर च्याम्पियन।
वसीली Virastyuk - 2004 मा दुनिया को सबै भन्दा शक्तिशाली मान्छे
बलियो योग्यको शीर्षक राम्रोसँग राम्रोसँग हुन सक्छ यूक्रेनी विसीसी Virastyuk बाट। 2003 मा उनले टूर्नामेंटमा तेस्रो स्थान जितेको "संसारमा सबैभन्दा बलियो व्यक्ति" र 2004 मा उनी यस प्रतिस्पर्धाको विजेता बने। उहाँले सम्पूर्ण शक्तिको आसपासमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जित्नुभयो। Vasiliy Virastyuk7कारहरु, कुल 11 मीटर को दूरी मा, 25 मीटर को दूरी को लागि र पांच जोडने ट्राम कारहरु जो 101.5 टन वजन को लागि।
दिमित्री खलदजी को रेकर्ड
यूक्रेनी दिमित्री खलदजीले धेरै रेकर्डहरू सेट गरेका थिए, जुन गिनीस पुस्तकमा रेकर्ड गरिएको थियो। उनी बच्चा हुदा धेरै बलियो थिए। 17 वर्षको उमेरमा दिमित्री कारहरू उठाउन सक्थे, फलामको चेनहरू आँसु पुछिदिन्थे, घोडाशोकहरू झुकाउन र हातहरूसँग नाक चलाउन सक्थे। उनको बलको लागि धन्यवाद, यूक्रेनी नायक बारम्बार एक बचावको रूपमा काम गरे। उहाँले घायलहरूलाई आकस्मिक वाहनोंबाट हटाउनुभयो, ढोका ढोका, हुड र इन्जिन। दिमित्री खलदजीले आफ्नो पहिलो रेकर्ड मास्को सर्कसमा बनायो, यसले डोनसेक कोइला खनिजलाई समर्पित गर्यो। बोगेटिरले आफ्नो टाउकोमा 152 किलो किलोग्राम पत्थर उठायो, कोइराला ब्लकको रूपमा प्रशोधन गरे र रगत भत्कियो,6औं शताब्दीमा पुरानो खेलाडी बाइनन द्वारा बनाइएको थियो। उहाँले आफ्नो टाउको 143 किलो किटर माथि उठाउनुभयो। दिमित्रीको दोस्रो रेकर्डलाई शैतानको फोर्ज भनिन्थ्यो। यस कोठा मा, नायक नाखून मा आउँछ र उनको सीने मा कंक्रीट को3ब्लक राखयो। त्यसोभए यी ब्लक सहायकहरु द्वारा तोडिएको छ। दिमित्री खलदजीले मात्र फलामको शक्तिमा फरक पार्छ, तर फलाममा पनि। तिनको बचपनमा महत्त्वपूर्ण जलाशय प्राप्त गर्न, उहाँले 8 अपरेसन र 12 रक्तचापको सामना गर्नु भयो । तल तपाईले बलियो व्यक्तिको फोटो देख्नुहुनेछ।
युरी व्लास्कोव - 4-टाइम विश्व च्याम्पियन
अर्को यूक्रेनी गठबन्धन, युरी पेट्रोभिच विलास्वभ, बचपन देखि बार बार बढाने को शौक थियो। उनले 31 विश्व रिकार्ड र सोभियत युनियनको 41 रिकार्ड सेट गरे । यसको अतिरिक्त, यूरी व्लालोव एक 4-पटक विश्व च्याम्पियन्स हो, 6-पटक युरोपियन च्याम्पियनसिप, यूएसएसआरआर को 5-समय चैंपियन र 1960 मा ओलम्पिक चैंपियन। उनले लगातार सात वर्षसम्म यी शीर्षकहरू जिते। र टोक्योको ओलम्पिक खेलहरूमा, उनी दोस्रो भए, जसले खेलबाट वलसावको प्रस्थान गर्न थाले। यूक्रेनी नायकहरूले एक किल - 199 किलोग्राममा 172 किलोग्राम, एक धक्का - 215 किलोग्राम वजन उठाउँथे।
स्ट्रङ्ग्स एंथोनी क्लार्क र जॉन वूटन
सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनिन्छ र फिलिपिन्स एन्थोनी क्लार्कले 363 किलोग्रामको वजनको साथ झल्किन्छ। म्यासाचुसेट्सका जॉन वाउटेनले पनि "विश्वको सबैभन्दा बलियो व्यक्ति" शीर्षकको दावी गर्छन्। उनले हालको विरुद्धको डुङ्गालाई 280 टन र एक हात्तीको ट्राफिकमा2वटा विमान बनायो।
जॉन पोल्थ एक व्यक्ति हो जसले क्वाटरिंग बचाउछ
"ग्रहमा सबैभन्दा बलियो मानिस" शीर्षकको योग्यता जॉन पोल्ट्रा हुन सक्छ। यो बलियो व्यक्ति, क्वार्टरिङको अधीनमा रहेको, घोडाहरू बाँच्न बाँच्न सक्षम थिए।
अलेक्जेंडर जेस - अर्को नायक
ग्रहमा सबै भन्दा शक्तिशाली विचार गर्न सकिन्छ र सिकिरीज जेस जसले पियानो पहन्न सक्दथे,90 किलो किलोग्राम कोर राख्थे र 220 किलोग्राम दाँतको वजन बढाए र धातुको ढोकामा टाँस्नुहोस्। आधा टन टनको ढुङ्गा उनको छातीमा मुछिएको थियो।
सबैभन्दा बलियो महिला
अमेरिकी जेन सुफल्क टोडलाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली महिला मानिन्छ। उनले वजन 453 किलोग्राम उठाए।
Svyatoslav बहादुर - राजकुमार र जनरल
क्याथरीन ठूलो को पसंदीदा। Grigory Orlov - क्याथरीन को महान को पसंदीदा
प्रथम विश्वयुद्धको ठूलो लडाकु: ब्रुसेलोस्की सफलता
क्रांति को लक्षण, सुधार देखि मतभेद
मारिया टेमिरीूकोभना: इवान भयानक को दोस्रो पत्नीको जीवनी
विस्तृत निर्देशनहरू "Forsigi": प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
होटल मैगनोलिया होटल4* (टर्की, Alanya): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणबाट नाम "YouTube" कसरी परिवर्तन गर्न
बिस्कुट "आलु" र एक सुखा आलु कसरी खाना पकाउनु?
बाल लागि व्यावसायिक शृंखला सीधा ब्राजिलियन Blowout: समीक्षा, प्रक्रिया को फाइदा र बेफाइदा
को भाँचिएको बोल्ट सही कसरी वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न?
कुकुर कलर "एटिटोय" - एक प्यान्ट बढाउन मद्दत
Assol Moldokmatova: जीवनी, फोटो
किन फल को सपना, जामुन? oneiromancy
कसरी एक निजी घरमा तल्ला एक्लै गर्न